लौ आयो विशेष अफर ! ५ जनाको टिकट काट्दा एकजनाको सित्तैमा - arthamandu
गृहपृष्ठ लौ आयो विशेष अफर ! ५ जनाको टिकट काट्दा एकजनाको सित्तैमा
सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष सफल बनाउनका लागि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमले समेत विशेष सहयोग गर्ने भएको छ । निगमले पर्यटन वर्ष सफल बनाउन सहयोग पुग्ने गरी नयाँ योजनाको घोषणा समेत गरेको छ ।
नयाँ योजना अनुसार निगमले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका आफ्ना यात्रुलाई टिकटमा छुट दिने भएको छ । निगमले काठमाडौँ–बैंकक–काठमाडौँ यात्रामा जाने यात्रुलाई ‘वान टिकट फ्रि इन ग्रुप फाइप’ योजनाअन्तर्गत पाँच जनाको समूहमा टिकट खरीदमा एक जनालाई टिकट निःशुल्क गराउने भएको हो ।
आगामी तीन महीना (जनवरी, फेबुअरी र मार्च) सम्म यो योजना लागू हुने निगमले जनाएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन तथा व्यापार अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो छुट योजना ल्याइएको निगमले जनाएको छ ।
निगमका अनुसार आवश्यकताका आधारमा अन्य गन्तव्यमा पनि यो योजना विस्तार गरने लक्ष्य छ । काठमाडौँ–बैंकक उडानका लागि टिकटमा हरेक यात्रुले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु १२ हजार तिर्नुपर्छ ।
निगमले यो गन्तव्यमा सातामा तीन दिन सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान भर्दै आएको छ । निगमले अहिले विभिन्न आठ गन्तव्यमा भारतको नयाँदिल्ली, बैंगलोर, मुम्बई, मलेसिया, सिङ्गापुर, बैंकक र कतारमा उडान भर्दै आएको छ ।
निकट भविष्यमै जापान, चीन, दक्षिण कोरिया र साउदी अरबमा सिधा उडान गर्ने योजनाका साथ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निगमसँग हाल दुई अन्तर्राष्ट्रिय वाइड बडी ए–३३० जहाज, दुई न्यारो बडी ए–३२० जहाज र एक बोइङ ७५७ जहाज छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भनेर नै २ वटा वाइड बडी ए–३३० जहाज भित्र्याएको थियो । उक्त जहाज खरिद प्रकरणमा अनियमिता भएको विषय पनि सर्वत्र चर्चामा छ । उक्त विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले अनियमितता ठहर गर्दै दोषिलाई कारबाही सिफारिस समेत गरिसकेको छ भने सरकारले गठन गरेको एक समिति र संसदकै अर्को समितिले समेत उपसमिति गठन गरेर वाइडबडीका विषयमा छानविन गरिरहेको छ ।
निगमका अधिकारीहरुले खरिद प्रकरणमा अनियमितता नभएको प्रष्टीकरण दिदै आएका छन् भने सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष सफल बनाउन वाइडबडीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने समेत बताउदै आएका छन् ।
पछिल्लाे - जनसेवीको ४३९ प्रतिशतले नाफामा बृद्धि
अघिल्लाे - ‘अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको समस्याः वास्तविकता भन्दा पनि धेरै भ्रम र अफवाह’